Ulutsha - Imagazini yoyilo
Ikhola Yenja Le ayisiyiyo kuphela i-Collar yezinja, yiKhola yeNja enentamo entlekayo. UFrida usebenzisa ulusu olusemgangathweni ngobhedu olomeleleyo. Xa uyila eli phetshana kuye kwafuneka acinge ngendlela elula ekhuselekileyo yokufaka umqala ngelixa inja inxibe ikhola. Ikhola nayo kwakufuneka ibe neemvakalelo eziethe-ethe ngaphandle komgexo. Ngolu luyilo, umgexo ongenakonakala, umniniyo unokuhombisa inja yabo xa benqwenela.
Isinamon Roll Kunye Nobusi
Isinamon Roll Kunye Nobusi I-Drop yezulu yirisonon roll ezaliswe ngobusi obucocekileyo obusetyenziswa iti. Umbono yayikukudibanisa ukutya ezimbini ezisetyenziswa ngokwahlukeneyo zenze imveliso entsha yonke. Abaqulunqiweyo baphefumlelwa ngokwenziwa komgaqo we-sinamon, basebenzisa indlela yabo yokuqengqeleka njengesiqulatho sobusi kwaye ukuze bakwazi ukupakisha imiqolo yesinamoni basebenzise i-beewax ukwahlula kunye nokupakisha imiqolo yesinamon. Inemifanekiso yase-Egypt eboniswe kumphezulu wayo kwaye kungenxa yokuba amaJiphutha angabantu bokuqala abakubonayo ukubaluleka kwesinamoni kwaye basebenzisa ubusi njengobutyebi! Le mveliso ingangumqondiso wezulu kwiikomityi zakho zeti.
Ukutya Sela uBuhle bufana ne-jewel entle onokuyisela! Senze indibaniselwano yezinto ezimbini ezazisetyenziswa ngokwahlukeneyo kunye neti: iilekese zelitye kunye neelenis zelensi. Olu luyilo lutyiwa ngokupheleleyo. Ngokongeza izilayi zelensi kulwakhiwo lwepipi yelwiti, incasa yalo iba ngcono kakhulu kwaye nexabiso lokutya kwalo liyonyuka ngenxa yeevithamini zelamuni. Abaqulunqi bamane bathatha indawo yezihlahla ukuba amakristali eeliti ayebanjelwe ngesilayisi esomileyo. Isiselo sokuBuhle sisibonelo esipheleleyo sehlabathi lanamhlanje elizisa ubuhle kunye nokusebenza kakuhle kunye.
Isiphuzo Olu luyilo luyinto entsha yokutyela kunye neChia, umbono ophambili yayikukuyilela ivenkile yokutyela enezinto ezininzi zokucamngca.Olo luyilo luza kunye nemibala eyahlukeneyo enokuthi ibonwe phantsi kwesibane esimnyama esenza ukuba ilungele amaqela neeklabhu. I-Chia iyakwazi ukufunxa kwaye igcine nayiphi na incasa kunye nombala ukuze xa umntu esenza i-cocktail ene-Firefly banokufumana i-flavour ezahlukeneyo inyathelo ngesinyathelo. Ixabiso lesondlo sale mveliso liphezulu ngokuthelekiswa nezinye i-cocktails kwaye konke oko kungenxa yexabiso eliphakamileyo lesondlo se-Chia kunye neekhalori eziphantsi. . Olu luyilo lisahluko esitsha kwimbali yeziselo kunye ne-cocktails.
I-Capsule Inqanawa yokupheka yaseWild, yicostum enezithako ezahlukeneyo zendalo kwaye yenzelwe ukutshaya ukutya kunye nokwenza izithambisi ezahlukeneyo kunye neziqholo. Uninzi lwabantu lukholelwa ukuba ekuphela kwendlela yokwenza ukutya kutshaye kukutshisa iintlobo ezahlukeneyo zeenkuni kodwa inyani ikuku, ungenza ukutya kwakho kutshaye ngezinto ezininzi kwaye wenze incasa nevumba elitsha liphela. Abaqulunqi baqonda umohluko wokungcamla kwihlabathi liphela yiyo loo nto uyilo lutshintshe ngokupheleleyo xa kuziwa kumbandela wokusebenziseka kwiingingqi ezahlukeneyo. Ezi caphuthi zingena zixube kunye nezithako ezizodwa.
Vivit Collection Amacici Kunye Neringi Saturday 25 September
Bridal Veil I-Chandelier Friday 24 September
FinaMill Smart Ekhitshini Lokusila Thursday 23 September
Ikhola Yenja Ikhola Yenja Isinamon Roll Kunye Nobusi Ukutya Isiphuzo I-Capsule